Izimvo zokuhombisa zothando -Imibono yokuhombisa ngamaRoma kumagumbi - Iingcebiso Zomyili
Izimvo zokuhombisa zothando -Imibono yokuhombisa ngamaRoma kumagumbi
UJohn KernickEzothando akufuneki zigcinwe ngoFebruwari 14. Apha, sikubonisa indlela yokwenza uhombiso lothando kunye nabayili abahlanu abahlukeneyo nakwigumbi ngalinye lendlu yakho.Jonga igalari 31Iifoto UJohn Kernick 1I-31Hlela iBloom enyeIntyatyambo enkulu, efana nemagnolia, ayifuni naziphi na izinto zokuhombisa. Ijongeka imangalisa iyodwa, idada kwisitya esincinci seLimoges. Umyili wezinto zangaphakathi uHal Williamson ukhethe intyatyambo enevumba elimnandi kubathengi bakhe abahlala eNew Orleans. UJohn Kernick MbiniI-31Zama iToilet encinci
Kwigumbi lokutyela ekhaya, izitulo zikaLouis XV ziphakanyisiwe kwindlu yangasese ebizwa ngokuba yiLouanaana Purchase. 'Isihlalo ngasinye sibonisa imifanekiso eyahlukeneyo,' utshilo uHal Williamson, kubandakanya iSt. Louis Cathedral, amasimi, kunye nezikhephe ezibonisa umlambo.
UJohn Kernick 3I-31Intle ngePinkiIzitulo zamaphiko zikaLouis XVI kunye nesofa zinokubonakala zihlelekile, kodwa izitulo 'zinendawo entle yokuma, ukuze uhlale kakuhle iiyure, utshilo uWillion,' kwaye uninzi luthathwa esofeni. ' I-chandelier, i-urns ejikeleze indawo yomlilo, isibuko kwi-mantel, kunye ne-tiered sconce yafunyanwa kwiivenkile ze-antique zaseNew Orleans. UJohn Kernick 4I-31Ndihleli BuhleUWillionon wenza ifayile ye- igumbi yokuhlala Ngumfazi onomdla ngokuluhlu olufihlakeleyo lwe-purple: i-amethyst, i-lavender, i-lilac, iplamu. Iindonga ngu-Benjamin Moore's mauvey iDriftscape Tan. UJohn Kernick 5I-31Zisa ngaphandleUkuziva umyezo omnandi, uWillionon waxhoma amagqabi ebhanana ngobungakanani bobomi - iphepha lomtyikityo laseBeverly Hills - ekhitshini, ukuze anganiki idrama yesikali kuphela, kodwa ukuqhubeka nenkundla kunye namagqabi okwenene ebhanana ngaphandle nje kweengcango zaseFrance . UJohn Kernick 6I-31Yazi ukuba iBlue inokuba yeyothando
'Ndithe xa ndikhupha i-cream, mfusa, lavender, luhlaza okwesibhakabhaka, kunye ne-aqua e-silk efakwe i-duvet, umthengi wam wayebamba umphefumlo wakhe, wayenemincili. Yenye yezo zinqabileyo, ezintle ezifunyenweyo, utshilo uHal Williamson.
UJohn Kernick 7I-31Ixhomekeke kubo ukuba bayafuna ukuthenga le ndawo...Isipili esivelisiweyo saseVenetian kunye nokuhonjiswa ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kwakenzelwe ukuba zihambe kunye. UJohn Kernick 8I-31Igumbi elipinkiKwigumbi lesibini lomgangatho- 'isibingelelo sika-Ella' - ifoto ka-Ella Fitzgerald, ethathwe kwiNew Orleans Jazz kunye noMnyhadala weLifa leMveli, ixhonywe ngaphezulu kwedesika eqingqiweyo yaseFrance. Iindonga nguMarta Stewart's Grisaille kaSherwin-Williams. UJohn Kernick 9I-31Luhlaza- kunye noPinki- ngomonaIindonga eziluhlaza eziluhlaza (uBenjamin Moore's Castleton Mist) usete imeko yokudibana kwi-garçonnière. Izitulo zikaLouis XV zigutyungelwe yiprinta yase-Afrika ephefumlelwe nguKravet. Umyili wezinto zangaphakathi uHal Williamson wazimangaza ngokufumana ipinki eshushu enqabileyo, igolide, kunye ne-citrus green antique yombhoxo odibanisa imibala yegumbi kunye. UJames Merrell 10I-31Ukutya kwezothando'Ukonwaba yile nto iyiPalm Beach, utshilo umyili uGary McBournie. Yonke into emhlophe, kubandakanya ibhodi esecaleni evela kwiLars Bolander kunye nezitulo zaseTshayina zeChippendale, yenza umahluko ocacileyo kwiindonga ezenziwe ngodada-iqanda-luhlaza okwesibhakabhaka. Nangona yayintsha, i-Dennis kunye ne-Leen chandelier yafunyanwa kwivenkile ye-antique yase-Palm Beach: 'Mhlawumbi yayinkulu kakhulu kwindlu yomntu. Kodwa apha, izalisa loo nto isembindini wegumbi kwaye iyinike uphawu. ' UJames Merrell Shumi elinanyeI-31Faka iSoft, Lighting LightingUkukhanya okutshatileyo yayikukuthini umyili uGary McBournie ejolise kwigumbi lokuhlala kweli khaya lasePalm Beach. Kwii-pilasters phakathi kweminyango yaseFrance, wakhwela i-Baguès crystal sconces evela eFrance kancinci. Ikhethiweyo ngenxa yesilivere yayo yaseVenice, isibane seglasi se-mercury esivela ku-Walker Zabriskie. UJames Merrell 12I-31Intwana encinci yothando lwakudalaUkuphinda ahlaziye isibini sezitulo ze-antique ze-Biedermeier, uMcBournie wenza iqhinga lakhe kumalaphu amathathu: 'Ngaphandle kokufumana kanye imibala ebendiyifuna, ndiyayithanda indlela eyakhiwe ngayo.' Ikhabhinethi yamaTaliyane yama-1950 iqatywe amagqabi ngeemoto, 'uhlobo abalusebenzisayo ngaphakathi kwizithuthi zeembaleki ezindala.' UJames Merrell 13I-31Igumbi loSapho elimnandiImibala yesitrasi ayizizo zodwa izinto ezimnandi kweli gumbi losapho. Ukuchukumisa kwe pinki nomhlophe yongeza nentwana yobufazi. Umbala wodonga nguBenjamin Moore iLemon Meringue. Umbhoxo ovela eStark. 14I-31ILoggia eNtofontofoVula ibhotile yewayini kunye nomntu omthandayo kwi-loggia. Inothando kakhulu! Ifenitshala yaseBrown yaseJordani, evela kwingqokelela yeVenetian, ibekwe ngendlela engaqhelekanga kwii-engile ezingahleliwe kwi-loggia. Ii-Cushion zikwi-solbrella eziqinileyo ezintathu. Imithwalo evela kwiCrate kunye noMgqomo; Izibane ezivela kwiXesha leFanitshala yeHlathi. UJames Merrell Shumi elinantlanuI-31Igumbi lokulala labasetyhini
Kwindlu yasePalm Beach e, igumbi lokulala lesinyithi egumbini lokulala lingu Iiveki zeNiermann , Kunye neepinki ezipinki, ezimdaka, kunye ezimhlophe zivela kwiRest Hardware. A UMitchell Gold + uBob Williams Isofa ye-Thad igutyungelwe kwelona bala lithambileyo onokucinga ngalo - iGreyworkworks 'Academy iluka ngombala opinki. 'Ipinki ayisiyi-gag-me pink,' utshilo uGary McBournie, 'Ithambe ngokupheleleyo. Ibhedi yentsimbi iyanceda ukuyilawula, ngokunjalo nelinen yebhedi emdaka nepinki. '
UJames Merrell 16I-31Ibhedi yothandoYintoni enothando ngakumbi kune ibhodi yentloko eneenkcukacha nelinen entle? 'Ukukrola' kwibhodi eyintloko kwigumbi leendwendwe ngumyili uGary McBournie yitrampe l'oeil. UJames Merrell 17I-31Ukuhombisa isipiliKwigumbi lokulala elihle, uMcBournie wafumana isisombululo sothando kwisipili esincinci esincinci se-1920s. 'Songeze la bhanti sinceda ukulinganisa, utshilo. 18I-31Ukusekwa kwezothandoUmyili wezakhiwo uWayne Leong uyile uyilo lwale ndlu yeendwendwe yaseNapa Valley kwizakhiwo zasemaphandleni eProvence. Iikholamu zamatye e-loggia zakhiwa ngamatye agrunjwe kwindawo leyo. Itheyibhile yenkulungwane ye-17 yeenyawo ngenkulungwane ye-17 yentsimbi kunye nesileyiti. Isitshixo somatshini wentsimbi sivela kwiFomations. Kwaye umbono uyachukumisa .... I-Dominique vorillon 19I-31Ikhitshi lokubonelaUyilo loyilo kunye nesihombiso somhlobiso sokwenza ikhitshi likhaphukhaphu kwaye libambe indawo yeqonga. Uyilo lomculi uMichael Duté oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomhlophe luzisa iindonga kunye nophahla olugqunywe ngumgqomo ebomini. Isinki yendlu yefama kunye namabala eemabula agcina imeko esemaphandleni, esemgangathweni wokuqala wesakhiwo. Isikhenkcisi esisezantsi kweZero sithetha ukuba kuphela kwesixhobo esibonakalayo sesitovu. Iifestile kunye neengcango ezivulekileyo zivulekile, zisebenzisa umoya kunye nokukhanya. I-Dominique vorillon Amashumi amabiniI-31Uhambo oluya eParis?Ukuba awukwazi ukuguqula uhambo oluya eParis, kutheni ungaphathi enye into ebalulekileyo kwisidlo sangokuhlwa kwigumbi lokutyela laseParis? Indlwana leyo yafunyanwa eFrance. Isiphatho somthi saseFransi somthi nesinyithi esenziwe ngamalungu e-antique avela kwi-Antique kunye ne-Art Exchange. Itafile yokutyela yase-Spain yenkulungwane ye-19 ivela eHabité. Izitulo zokutya zika-Anna ezivela kwingqokelela kaTaylor Scott zinxiba uServ D'Aimer, ithoyilethi yaseNobilis. I-Dominique vorillon amashumi amabini ananyeI-31Indawo yokuhlala yaseFranceUkufudumeza ngomlilo kule regal kunye negumbi lokuhlala eliphefumlelweyo laseFrance. Umyili u-Erin Martin wadala eli gumbi linama-antique ama-French, ama-Italiya kunye neSpanish, exuba iziqwenga ezintsha. UMartin waphakamisa isofa yaseHannannis yeHlobo laseHlobo eProvence Hay, ilinen epeyintwe ngesandla yelinen eDintiman. I-Dominique vorillon 22I-31Igumbi lokulala elinjengelifuImibala ethambileyo yenza ukuba eli gumbi lizive ngathi lilifu elithambileyo. UMartin ufumene ibhodi yentloko yenaliti eyolulwe ngesandla kwimarike yentakumba eFrance, wayisebenzisa ukunika imbali kunye nokuzimela kwindawo entsha esandula ukuthengwa yebhedi yaseBrandwen eyakhiwe kwizitrato. Ukukhanya kwependant kweScudo Saraceno kuyilo lweVenice lwakudala luvela kuSue Fisher King. Ezantsi kwebhedi, u-Dennis kunye no-Leen's Lancaster settee banxibe ilinen kaSamuweli kunye noonyana eNyakatho eluhlaza okwesibhakabhaka. I-Dominique vorillon 2. 3I-31Igumbi lePowder eNtofontofoNgaphantsi kwesiseko esivela eHabité, i-antique marble sink kabini yongeza ubudala kunye nobunzima kwigumbi lokuhlambela labandwendweli. 24I-31Igumbi lokuHlala elinobuhleUmtsalane ophumlileyo wegumbi lokuhlala ungqina ithiyori ka-Alessandra Branca yokuba eyona nto intle intuthuzelo yintuthuzelo. Ukuqhekeza ifestile ye-bay, isidlo esenzelwe yena sigutyungelwe kwi-velvet yelinen yeGretchen. I-ottoman yesiko ityhilwe ngokungaqhelekanga eRogers naseGoffigon. Imithwalo yelinen yeentyatyambo yiprinta yohambo, ivelvet eblue yiFonthill. Izibane ze-swing-arm ezibomvu zafunyanwa kwiiNicholas Antiques; izibiyeli ezidityanisiweyo kunye netreyi yetail zivela eAtelier Branca. 25I-31Ukuhlala kwabantu abathandanayoUAtelier Branca uyile izitulo zokutya zebhola kunye neenzipho zokutyela ezifakwe kwilinen efekethisiweyo yeNobilis. Isibuko se-giltwood nguLouis XVI kwaye i-droll bronze kunye ne-crystal chandelier ngumdiliya. Itafile yokutyela i-walwick ye-walwick yafunyanwa e-Emanuel Morez, kunye ne-sconces e-John Rosselli. 26I-31Ikhitshi laseRusticOku ikhitshi ibonisa ukuba i-rustic inokuthandana, nayo. Ngelixa isiqithi kunye nekhabhathi ekhitshini zazenziwe ngokwazo, izitulo ezimnyama ezi-spiffy zafunyanwa ePottery Barn. 27I-31Igumbi lokulala elinoxoloIgunya kwigumbi lokulala yayiluxolo noxolo. Ukugqunywa ngodonga okwenziwe ngesandla ngu-de Gournay kunika igumbi lokulala eliyintloko ilizwe elidala. Iingcango zaseFransi ezifakiwe zizisa ukukhanya. UBranca uyile ibhodi yelinen-velvet. Iilampshades nguNina Campbell.
Kukho into etofotofo malunga nekhaphethi ekhanyayo kwigumbi lokulala. Ikhaphethi nantsi i-beige ethambileyo yokutshatisa ivelvet yebhodi yentloko, kwaye amaphepha e-Pratesi anciphisiwe nge-beige, nayo. Ndifumene intle yelitye lekalika lekhulu le-19 eParis, kodwa andazi ukuba ndifuna ukuthetha ngesipili esijinga ngaphezulu! Yenzelwe ukutyibilika ngasekunene kwaye ifihle umabonakude, kodwa ngelishwa indoda yesipili yenze ukuba ibe nkulu kakhulu. Mfutshane malunga nokwakhiwa kwakhona kodonga emva kwayo, akukho nto sinokuyenza enokuyenza ifaneleke.
28I-31Ukuthandana KwangokuIlaphu le-Donghia ligubungela isakhelo sebhedi eyenzelwe i-Sally Markham kwigumbi lokulala lentombi; Ilinen zebhedi ngu Kate Spade. Ilaphu lase China China ligubungela ibhentshi lomlenze waseLucite. Ikhaphethi yiKanpur cotton kunye ne-chenille evela eBeauvais. UPieter Estersohn 29I-31Ipinki efihlakeleyo
Igumbi lokulala eliyintloko eGreenwich, eConnecticut, linokukhanya okufihlakeleyo okupinki. 'Umfazi uziva ekhululekile kule mibala kwaye oku kuyonyusa imvakalelo yokuthandana, utshilo umyili uSally Markham. 'Ngokwenyani iqhinga lomhombisi elidala lokufakela izibane ezipinki, kuba lenza ukukhanya okuncoma kakhulu ulusu.' A URalph Lauren Ukuphosa i-mink kufakwe phezu kwebhedi yesilika eyenziwe ngu-Markham.
30I-31Yenzelwe kodwa yothandoIbhedi emnyama yentsimbi eyenziweyo kweli gumbi lokulala ngumyili uSally Henderson, inokusetyenziswa njengesofa kunye nebhedi. Itheyibhile yekofu eLucite Crisp esuka kwivenkile yaseConran ihleli ngaphezulu kombhoxo wePottery Barn Teen. I-chessboard nguKarim Rashid, ovela kwivenkile ye-MoMA. Zonke iimpahla zivela kwiGuilders Designers nge-Osborne & Little. OkulandelayoImibala yeKhitshi Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukuba babonelele ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
imibala efanelekileyo yekhitshi 2020
ziikristale kunye nokuba zithetha ntoni
Izibane zangaphandle zepatio